13 Nooc Oo Kamid Ah Ololeyaal Email Kicin Ah Oo Ay Tahay Inaad Hirgaliso | Martech Zone
13 Nooc oo Kamid ah Ololayaasha Emailka Kiciyay ee Ay Tahay Inaad Hirgaliso
Talaado, Oktoobar 19, 2021 Arbacada, Oktoobar 20, 2021 Douglas Karr
Markaan la shaqeynayay dhowr iibiye email, marwalba waan layaabay la'aanta horay loo qorsheeyay, wax ku ool ah kiciyay ololeyaal emayl gudaha xisaabaadka marka la hirgeliyo. Haddii aad tahay goob wax akhrinaysa - waa in aad ololahan diyaar u tahay in aad nidaamkaaga gasho. Haddii aad tahay suuqgeyle iimaylka ah, waa inaad ka shaqaynaysaa inaad ku darto noocyo badan oo iimaylo ah oo kiciyay intii aad awooddo si aad u kordhiso ka qaybgalka, iibsashada, haynta, iyo fursadaha kicinta.
Suuqgeeyayaasha aan isticmaalin ololeyaasha iimaylka ee la kiciyay ayaa hadda si dhab ah u maqan. Iyadoo iimaylada kiciyey ay korayaan korsashada, badi suuqlayda kama faa'iidaysanayaan xeeladan fudud.
Waa maxay E-mayllada la Kiciyey?
E-mayllada la kiciyay waa emayllada laga soo bilaabo akhbaaraha macaamiisha, astaanta, ama dookhyada. Tani way ka duwan tahay kuwa caadiga ah, ololayaasha farriimaha badan ee lagu fuliyo taariikhda ama waqtiga horay loo cayimay ee astaanta.
Sababtoo ah ololayaasha iimaylka ee kiciyay ayaa habdhaqan ahaan loo bartilmaameedsadaa oo waqtiyeeyay marka macaamiishu midkood filayo, waxay gaadhaan natiijooyin heersare ah marka la barbar dhigo ganacsiyada ololayaasha iimaylka caadiga ah sida wargeysyada. Sida laga soo xigtay Blueshift Benchmark Warbixinada ku saabsan Suuqgeynta iimaylka ee la kiciyay:
Celcelis ahaan, iimaylada la kiciyay waa 497% ka waxtar badan emails qaraxa. Tan waxaa wada a 468% heerka gujis sare, iyo a 525% heerka beddelka sare.
Celcelis ahaan, ololayaasha iimaylka ee isticmaalaya wakht-gaabaynta wakhtiga waa 157% aad uga waxtar badan iimaylada wakhtiga aan hawlgelinta ahayn. Tan waxaa wada a 81% heerka gujis sare, iyo a 234% heerka beddelka sare.
Celcelis ahaan, ololeyaasha iimaylka ee la isticmaalayo talooyinka waa 116% ka waxtar badan ololaha dufcadaha oo aan talo bixin. Tan waxaa wada a 22% heerka gujis sare, iyo a 209% heerka beddelka sare.
Blueshift waxay falanqeysay 14.9 bilyan fariimaha iimaylka iyo ogeysiisyada riixitaanka mobilada ee ay soo diraan macaamiisha Blueshift. Waxay u falanqeeyeen xogtan si ay u fahmaan kala duwanaanshaha cabbiraadaha ka-qaybgalka asaasiga ah oo ay ku jiraan qiimaha gujinta iyo heerka beddelka ee u dhexeeya noocyada kala duwan ee isgaarsiinta. Xog-ururintooda bartilmaameedku waxay ka dhigan tahay in ka badan 12 warshadood oo toosan oo ay ku jiraan eCommerce, Maaliyadda Macmiilka, Daryeelka Caafimaadka, Warbaahinta, Waxbarashada, iyo in ka badan.
Qaybaha ballaaran ee ololeyaasha emaylka kiciyay waxay hoos yimaadaan meertada nolosha, macaamilka, dib u eegista, nolosha macaamiisha, iyo kiciyaasha waqtiga-dhabta ah. Si qaas ah, ololeyaal emayl kiciyay waxaa ka mid ah:
Soo Dhaweyn Email - Tani waa waqtigii aad dejin lahayd xiriirka, kuna siin lahayd hagitaan dhaqanka aad rabto inaad dejiso.
E-mayllada saaran Mararka qaarkood macaamiishaadu waxay u baahan yihiin a riix si aad uga caawiso inay sameystaan ​​koontadooda ama ay bilaabaan adeegsiga bartaada ama dukaankaaga.
Waxqabadka Hore - Macaamiisha hawlgeliyay laakiin aan si dhakhso leh u hawl galin ayaa lagu sasabi karaa inay ku sameeyaan emaylladan.
Dib-u-hawlgelinta Email - Dib-u-hawlgal macaamiisha aan ka jawaabin ama gujin inta lagu jiro wareegga iibsigaaga.
E-maylka Dib U Soo Dirashada - Ololeyaasha gawaarida dukaamaysiga ee la dhaafay ayaa sii wadaya beddelka ugu badan ee suuqgeeyayaasha emaylka, gaar ahaan goobta ganacsiga e-commerce.
Email Macaamil - Farriimaha adeegyadu waa fursado aad u wanaagsan oo wax lagu baro rajooyinkaaga iyo macaamiishaada sidoo kalena aad u siiso fursado hawlgal oo beddelaad ah. Waxaa ka mid ah rasiidka elektarooniga ah, xaqiijinta iibsiga, amarada gadaal, xaqiijinta dalabka, xaqiijinta dhoofinta iyo soo celinta ama soo celinta kiciyeyaasha emaylka.
Soo celinta iimaylka - U dirida ogeysiiska macmiilka marka alaabtu ku soo noqoto kaydka waa hab fiican oo lagu kobciyo beddelka oo macmiilku dib ugu soo celiyo goobtaada.
Email Xisaabeed - Ogeysiisyada macaamiisha isbeddelada koontadooda, sida cusbooneysiinta lambarka sirta ah, isbeddelada emaylka, isbeddelada bogga, iwm.
Emailka Dhacdada Shakhsiyeed - Maalinta dhalashada, sanadguurada, iyo dhacdooyinka kale ee shaqsiyeed ee bixin kara dalabyo ama hawlgelin gaar ah.
Emailka Dhaqanka - Marka macaamiishu jir ahaan ama dhijitaal ahaan ula macaamilaan astaantaada, hindhisidda fariinta iimaylka gaarka ah ee la xidhiidha waxay kaa caawin kartaa dardargelinta safarka iibka. Tusaale ahaan, haddii macmiilku baadho goobtaada oo uu ka tago… waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bixiso iimaylka talo-bixinta alaabta kaas oo bixiya soo jeedin ama macluumaad dheeraad ah oo ku soo jiidanaya inay soo noqdaan.
E-maylka Milestone - Farriimaha hambalyada ee loogu talagalay macaamiisha gaadhay heer gaar ah astaantaada.
Waqti-kiciyayaal - Cimilada, goobta, iyo kicinta dhacdooyinka ku saleysan inaad si qoto dheer ula macaamisho rajadaada ama macaamiishaada.
Emailka sahanka - Kadib amar ama mashruuc la dhammeeyo, diritaanka iimaylka si aad u weydiiso sida shirkaddaadu u samaysay waa hab fiican oo lagu soo ururiyo jawaab celin cajiib ah oo ku saabsan alaabtaada, adeegyadaada, iyo hababka. Tan waxa kale oo raaci kara iimaylka dib u eegista halkaas oo aad ka codsato faallooyinka macaamiishaada si aad ula wadaagto hagaha iyo boggaga dib u eegista.
Daraasadu waxay xaqiijineysaa in suuqleydu ay ka faa'iideysan doonaan hirgelinta ololeyaal ballaaran oo isku dhafan taas oo ka dhalanaysa isku darka waxyaabaha kiciya si ay sifiican ugu hawlgalaan uguna badalaan macaamiisha. Suuqleyda waxaa laga yaabaa inay is arkaan iyagoo dib u qiimeynaya istiraatiijiyadoodii ololaha ee kicinta inta lagu jiro xilliyada wax iibsiga ee iskuulka ka hor iyo ka hor xilliga dukaamaysiga fasaxa.
Eeg Warbixinta Qiimaynta Suuqgeynta Ku Salaysan Kicinta Blueshift
Tags: celceliska qiimaha dalabkadib u soo dir emaylkaxaqiijinta emaylkaEmail Marketingdhacdooyinkareacsiemaylka dib u hawlgelintadib u soo kabashadaemaylka dib u soo celintasoo celinta emaylkadirista iimaylkamacaamil ganacsiemaylka macaamilkakicindhacdooyinka kiciyaemayl kiciyaykiciyay olole emaylnoocyada emailka kiciyaysoo dhaweynSoo dhawow emailkahaahaa suuq-geynta nolosha
5 Siyaabood oo Dhegaysiga Bulshadu u Dhiso Wacyiga Calaamadda ee aad Runtii doonayso
Foomamka Excel ee Nadiifinta Xogta Guud